Abavelisi beFlatbed Diecutting & Suppliers- China Flatbed Diecutting Factory
I-GUOWANG T-1060BF I-DIE-CUTING UMTSHINI ONGQALAYO
I-T1060BF yinto entsha yeenjineli zaseGuowang ukudibanisa ngokugqibeleleyo inzuzo yeUKUBHALAumatshini kunye nemveli umatshini die-ukusika ngeUKUHLULA, T1060BF(Isizukulwana sesibini)inento yonke efana ne-T1060B ukuze ube nokukhawuleza, okuchanekileyo kunye nesantya esiphezulu sokubaleka, ukugqiba ukufunjwa kwemveliso kunye nokutshintsha kwepalethi ngokuzenzekelayo ( Ukuhanjiswa okuthe tye ), kunye neqhosha elinye, umatshini unokutshintshelwa kunikezelo lwemisebenzi yemveli ( Ukuhanjiswa komgca othe ngqo) enemoto yokubeka unikezelo olungayekiyo.Akukho nxalenye yoomatshini ekufuneka itshintshwe ngexesha lenkqubo, sisisombululo esigqibeleleyo kumthengi ofuna ukutshintshwa komsebenzi rhoqo kunye nokutshintsha umsebenzi ngokukhawuleza.
Umatshini wokusika we-Flatbed ozenzekelayo MWZ-1650G
Ifanele i-1≤ibhodi ekhutshiweyo≤9mm ngesantya esiphezulu sokusika kunye nokuqhawula.
Max.Isantya 5500s/h Max.Ukusika uxinzelelo 450T
Ubungakanani: 1630 * 1180mm
Umphetho okhokelayo/iCassette style feeder/Isondlo esisezantsi esifunxayo
Isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu, utshintsho olukhawulezayo lomsebenzi.
Century MWB 1450Q (ngokuhluba) Semi-Auto Flatbed Die Cutter
Imodeli ye-Century 1450 iyakwazi ukuphatha ibhodi edibeneyo, ibhodi yeplastiki kunye nekhadibhodi yokubonisa, i-POS, iibhokisi zokupakisha njl.
I-GUOWANG C80Q I-AUTOMATIC DIE-CUTTER ENE-STRIPPING
Isondlo esikumgangatho ophezulu esineesuckers ezi-4 zokuphakamisa iphepha kunye neesuckers ezi-4 zokuthunyelwa kwephepha ziqinisekisa ukuba lizinzile kwaye likhawuleza iphepha lokutyisa.Umphakamo kunye ne-engile yeesuckers zilungelelaniswa ngokulula ukugcina amashiti ngokuthe ngqo.
Umtshini we-double-sheet detector, i-sheet-retading device, i-air blower ehlengahlengiswayo iqinisekisa ukuba amaphepha adluliselwe kwitafile yebhanti ngokuthe ngcembe nangokuchanekileyo.
Impompo yokufunxa ivela kwi-German Becker.
Umatshini wokusika we-MWZ1620N oBonelela ngokuzenzekela uDie oneCandelo lokuHluba ngokupheleleyo
I-GUOWANG C106Q I-AUTOMATIC DIE-CUTTER ENE-STRIPPING
Iimfumba ezigqibeleleyo zingenziwa kwiipalethi ezihamba kwiireyili zenkqubo yokulayisha kwangaphambili.Oku kwenza igalelo elibalulekileyo kwimveliso egudileyo kwaye vumela umqhubi ahambise imfumba elungisiweyo kwi-feeder ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo.
Indawo enye yothethathethwano lwepneumatic olusebenza ngoomatshini clutch luqinisekisa iphepha lokuqala emva kokuba umatshini ngamnye uqalwa ngokutsha usoloko wondliwa kwiileyile zangaphambili ukuze kube lula, ukonga ixesha kunye nokugcina imathiriyeli ukulungelelaniswa.
Icala lecala linokutshintshwa ngokuthe ngqo phakathi kokutsala kunye nemowudi yokutyhala kumacala omabini omatshini ngokujika ibholithi ngaphandle kokongeza okanye ukususa iindawo.Oku kubonelela ngokuguquguquka kokulungiswa koluhlu olubanzi lwezinto: kungakhathaliseki nokuba amanqaku erejista asekhohlo okanye ngasekunene kwephepha.
I-GUOWANG C80 I-AUTOMATIC DIE-CUTTER NGAPHANDLE KOKUZIKWEBA
Icala kunye nangaphambili iileyile zinezinzwa ezichanekileyo, ezinokuthi zibone umbala omnyama kunye nephepha leplastiki.Uvakalelo luyahlengahlengiswa.
Inkqubo yokutshixa i-pneumatic yenza lula ukutshixa kunye nokukhululwa kwe-cutting chase kunye ne-plate yokusika.
Ipleyiti yokusika yokuphakamisa ipneumatic ukwenzela isilayidi esilula ngaphakathi nangaphandle.
Inkqubo ye-Centerline ekuleqeni ukufa kunye ne-transversal micro adjustment iqinisekisa ubhaliso oluchanekileyo olukhokelela ekutshintsheni umsebenzi okhawulezayo.
I-GUOWANG C106 I-AUTOMATIC DIE-CUTTER NGAPHANDLE KOKUKHIPHA
Ulungelelwaniso lwemfumba kwicala elinqamlezileyo kulawulwa yimoto ngokutya okuchanekileyo kwamaphepha.
Inkqubo yokulayisha kwangaphambili, ukutya okungayekiyo, imfumba ephezulu (Ubukhulu bokuphakama kwemfumba bufikelela kwi-1600mm).
I-GUOWANG R130 I-AUTOMATIC DIE-CUTTER NGAPHANDLE KOKUZIKWEBA
Ukubekwa okuchanekileyo kwe-Cutting chale elawulwa ngabenzi boluvo oluchanekileyo kunye nesixhobo sokutshixa esizenzekelayo.
Ukunciphisa isixhobo sokuthengisa.
Imotor ephambili yeSiemens elawulwa nguSchneider inverter.
I-GUOWANG R130Q I-AUTOMATIC DIE-CUTTER ENE-STRIPING
abenzi boluvo Optical kunye nenkqubo yokuyeka oluzenzekelayo kwitafile yokutya yenza ukuba ulungise inkqubo esweni- kulawulo olubanzi lomgangatho phezu kobubanzi bamashiti kunye nejem yephepha.
Iphaneli yokusebenza yenxalenye yokutya kulula ukulawula inkqubo yokutya kunye nomboniso we-LED.
I-GUOWANG T-106Q I-DIE-CUTTER EZIQHELEKILEYO EZIQHELEKILEYO ENE-BAHLUKO
I-T106Q yiyoa i-automated ephezulu kunye ne-ergonomic die-cutter kwimarike.Lo mphezulu woluhlu lomatshini uhambisa imveliso engenakuthelekiswa nanto enkosiiimpawu ezininzi zengokukhawuleza, imveliso engaphazamisekiyo, ixesha elifutshane lokumisela, ngelixa likwabonelelaixabiso eliphezulu ukusebenza kakuhle ukugcina ukhuphisana kushishino.
GW isikhululo kabini die-ukusika kunye nefoyile umatshini isitampu
IGuowang Automatic Double Station Die-cutting kunye neHot Foil-stamping Machine inokuqonda indibaniselwano eyahlukeneyo ngokwemfuno yomthengi.
Iyunithi yokuqala inokufikelela kuxinzelelo lwe-550T.ukuze ube nendawo enkulu yokunyathela+i-embossing enzulu+ i-foil-stamping eshushu+ukuhluba ngomtsi omnye.